Akwụkwọ nke Brooke Kovanda Martech Zone |
Edemede site na Brooke Kovanda
Azụmahịa na-ekpo ọkụ nke anyị bidoro na-anụ ọtụtụ ihe bụ obere oge. Obere oge na - emetụta omume na atụmanya ndị zụrụ ahịa ugbu a, ha na - agbanwekwa ụzọ ndị ahịa si azụ ahịa gafee ụlọ ọrụ. Ma gịnị bụ obere oge? N'ụzọ ndị dị a theyaa ka ha si eme njem ndị ahịa? Ọ dị mkpa ịghọta etu echiche obere oge si dị ọhụrụ na azụmaahịa dijitalụ. Chee echiche na Google na-eduga ụgwọ na nyocha ụzọ nke teknụzụ ekwentị ji agbanwe